विबाह चलिरहँदा १९ वर्षे विनिताको मण्डपमा नै मृ’त्यु, बेहुला भ’क्कानिएर रो’ए, देख्नेहरुका आँसु थामिएनन् – Sanchar Patrika
July 18, 2020 679
काठमाडौँ । मानिसको मृ’त्यु निश्चित छ । तर शुभकार्य गरिरहँदा कसैको मृ’त्यु भएका घ’टना संसारमा नै विरलै हुने गर्छन् । जसको साक्षी नै बनिन् भारतको उत्तर प्रदेशकी १९ वर्षीय विनिता । बेहुला सञ्जय शुक्रवार राति आफ्नो परिवारका साथ विनितालाई लिन पुगे तर उनले आफ्नी पत्निलाई घर लैजान भने पाएनन् । कारण विबाह चलिरहँदा नै विनिता मण्डपमा नै ल’डिन् ।
तत्कालै माइती र बेहुला पक्षले विनितालाई अस्पताल पुर्याएपनि अस्पतालले को’रोना परिक्षणको रिर्पोट ल्याउन भन्दै दुख दियो । विनिताकाको माइती पक्षले सक्दो कोशिस गरे पनि अस्पतालले भर्ना नगरेपछि उनको नि’धन भयो ।
नि’धनपछि बेहुला भ’क्कानिँदै रोए भने माइती पक्षमा स’न्नाटा नै छायो । कन्नौज प्रहरीले मृ’तकको श’व पोस्टमार्टमका लागि पठाएका छन् भने घ’टनाबारे अनुसन्धान थालेको जनाएको छ । विनिताको नि’धनपछि गाउँ नै शो’कमा डु’बेको छ भने सबै स्त’ब्ध बनेका छन् ।
Prevप्रधानमन्त्री ओलिबि रुद्द कपाल मु न्डन गर्न पैसा लिएर नक्कली नेपाली , पैसा लिएका खुलासा
Next३० वटा सार्वजनिक भाडाका सवारी साधन समातिए
महमा अलिकती पानी मिसाएर अनुहारमा लगाउनुहोस्, मिल्ने छ डण्डिफोर, दाग धब्बाबाट छुटकारा
५ वर्ष भन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई मास्क लगाउनु ख’त’रा, तत्काल रोक्नुहोस् : डब्ल्यूएचओ
मेसीलाई भित्र्याउन म्यानचेस्टर सिटीको कसरत
भारतबाट सलह नेपाल छिर्दै, अब अर्को भयावह चुनौती थपिने ! (6150)
देशभर कोरोनाले आतंकमच्चाईरहेका बेला भक्तपुरमा घट्यो अनौठो घटना, स्थानीयवासी परे अचम्म, मच्चियो हल्लीखल्ली ! (4948)